Conveyor Roller စုဆောင်းခြင်း
နှစ်ချက် Groove Conical roller
သွပ်ရည်စိမ် taper ကြိတ်စက်
ရော်ဘာကုတ်အင်္ကျီ Cone သယ်ဆောင် Roller
သံမဏိ Cone roller
ဓါး Edge Belt Conveyor
Conveyor သည် leveler
ကန်တော့ချွန် roller Grooved
သံမဏိ tapered နှစ်ကွင်းဆက် roller ၏ဖွဲ့စည်းပုံ - မောင်းနှင်မှုပုံစံအရ၎င်းကိုပါဝါ roller လိုင်းနှင့် non roller လိုင်းများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အဆင်အပြင်အလျားလိုက်သယ်ဆောင်နေသော roller လိုင်း၊ ရှုံ့။ သယ်ဆောင်သော roller လိုင်းသို့လှည့်နိုင်သည်။ roller လိုင်း။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။ စံ gauge roller ၏အတွင်းအကျယ်မှာ ၁၀၀-၂၀၀၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။
သံမဏိ tapered နှစ်ကွင်းဆက် roller ၏ဖွဲ့စည်းပုံ - မောင်းနှင်မှုပုံစံအရ၎င်းကိုပါဝါ roller လိုင်းနှင့် non roller လိုင်းများအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်သည်။ အဆင်အပြင်အလျားလိုက်သယ်ဆောင်နေသော roller လိုင်း၊ ရှုံ့။ သယ်ဆောင်သော roller လိုင်းသို့လှည့်နိုင်သည်။ roller လိုင်း။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်အမျိုးမျိုး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအထူးဒီဇိုင်းပြုလုပ်နိုင်သည်။
စံ gauge roller ၏အတွင်းအကျယ်မှာ ၁၀၀-၂၀၀၀ မီလီမီတာဖြစ်သည်။ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအရအခြားအထူးသတ်မှတ်ချက်များကိုလည်းလက်ခံနိုင်သည်။
လှည့်နေသော roller line ၏အလှည့်အချင်းပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖော်မြူလာအရတွက်ချက်သည်။ ဖောက်သည်၏လိုအပ်ချက်အရအခြားအထူးသတ်မှတ်ချက်များကိုလက်ခံနိုင်သည်။ သံမဏိ roller စီးရီး:
ကာဗွန်သံမဏိနှင့်သံမဏိကို roller ၏မျက်နှာပြင်အနေဖြင့်အသုံးပြုသည်။ ဂီယာပါ ၀ င်ခြင်းတွင်သတ္တုတံဆိပ်တုံးခြင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောတိကျသောအမှုန်ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လည်ပတ်ခြင်း၊ ကြီးမားသော bearing (တစ်ခုတည်းသော roller bearing သည် ၂၀-၁၀၀ ကီလိုဂရမ်အထိရောက်ရှိနိုင်သည်)၊ ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း၊ ပစ္စည်းကိရိယာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကုန်ကျစရိတ်နည်းခြင်းစသည်တို့၏အားသာချက်များရှိပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းအများစု၏ထုတ်လုပ်မှု၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ လယ်ကွင်း။
၁ ။ ကြိတ်စက် ပစ္စည်းနှင့်မျက်နှာပြင်ကုသမှု - ကာဗွန်သံမဏိ (သွပ်သွင်းခြင်း၊ ခရိုမီယမ်)၊ သံမဏိ၊ ကာဗွန်သံမဏိ (အကာအရံ၊ အဖုံး၊ ပက်ဖြန်း) စသည်တို့သည် roller shaft အရှည်၊ ထိရောက်သောဆလင်ဒါကိုယ်ထည်၊ ပိုက်နံရံအထူစသည်တို့ဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်နှင့်အညီစိတ်ကြိုက်;
2. ကာဗွန်သံမဏိအစိုင်အခဲ mandrel, အပြာသွပ်သို့မဟုတ် chromium plating, etc, ဒါမှမဟုတ်အားလုံးသံမဏိပစ္စည်း;
၃။ Shaft installation ပုံစံကိုရွေးချယ်နိုင်သည် - spring spring type၊ အတွင်းပိုင်းသွားရိုးပုံစံ၊ ပြင်ပချည်အမျိုးအစား၊ အပြည့်ပြားပြား၊ shaft split pin pin အပေါက်မှတဆင့်၊
အချင်း: 25, 32, 38, 50, 60, 76
အဆိုပါ mandrel သံမဏိသို့မဟုတ်ကာဗွန်သံမဏိသို့ခွဲခြားနိုင်ပါသည်
sprocket roller အတွက်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များ:
1. roller မျက်နှာပြင်၏ပစ္စည်းရွေးချယ်မှု - ကာဗွန်သံမဏိသွပ်သွင်းခြင်း၊ ခရိုမီယမ်၊ သံမဏိစသည်စသည်တို့ကို roller shaft length, ထိရောက်သောဆလင်ဒါကိုယ်ထည်၊ ပိုက်နံရံအထူစသည်တို့ကိုဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
2. ခိုင်မာသောရိုးတံကိုအပြာဇင့် (သို့) သံမဏိအားလုံးဖြင့်ကာဗွန်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ရိုးတံကိုအောက်ပါနည်းလမ်းများဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည် - Spring spring type၊ အတွင်းပိုင်းသွားရိုးတံ၊ အပြည့်အဝပြားပြားနှင့် shaft pin အပေါက်အမျိုးအစားမှတစ်ဆင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။
တပ်ဆင်ပြီးနောက် 3. ကြိတ်စက်အနှောင့်အယှက်မရှိဘဲပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်လှည့်နိုင်ပါတယ်;
4. ပါဝါ roller တစ်ခုတည်းကွင်းဆက်ဘီးသို့မဟုတ်နှစ်ဆကွင်းဆက်ဘီးကမောင်းနှင်နိုင်ပါတယ်။ သက်ဆိုင်သောကွင်းဆက်ဘီး၊ ကွင်းဆက်ဘီး၊ ကွင်းဆက်ပုံစံ - 06B / 08B / 10B စသည်။
ရှေ့သို့ roller သယ်ဆောင်ရော်ဘာကန်တော့ချွန်တစ်မျိုး
နောက်တစ်ခု: conical ပေါ်ကို roller လှည့်
ပေါ်ကို၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး တည်ချက် ...
အခန်း ၂၂၇၊ အဆောက်အ ဦး ၁၊ ၆၅၆ Qixing လမ်း၊ Wuxing ခရိုင်၊ Huzhou City, Zhejiang, China
ယခုကျွန်ုပ်တို့အားဖုန်းခေါ်ပါ - 0086-13325920830